Simona - Reny na famindram-po - Countdown ho an'ny fanjakana
Zanak'i Zaro izahay	Simona	on June 8, 2020:
Toy ny tany Fatima ny reninay. Nitafy akanjo fotsy avokoa izy, volamena ny sisin'ny akanjony, volamena ny lohany ary manana satroboninahitra mpanjakavavy sy lamba manarona fotsy izy; teo an-tsorony dia nisy akanjo fotsy izay nidina teo an-tongony. I Neny dia nametraka ny tanany teo am-bavaka ary teo anelanelan'izy ireo dia Rosary Masina lava vita tamin'ny perla.
Ry zanako malalako, tiako ianao, tiako am-pitiavana lehibe ianareo; Izaho no Reninao, Renin'ny maha-olombelona, ​​Ren'ny famindrampo.
Anaka, eo anilanao aho, tiako ianao, mihaino ny fisaonanao, namafa ny ranomasonao, manoroka ny handrinao, mifaly amin'ny fifaliananao, miarahako aminao, mitazona anao amin'ny tananao amin'ny dia amin'ny fiainanao , ny dian'ny finoana izay sarotra.
Anaka, ampaherezo ny finoanao amin'ny Sakramenta Masina. *
Ry zanako, tsy mbola antitra loatra ny olona iray ka hianatra hitia ny Tompo, tsy tara loatra ny hibebahana amin'ny hadisoana ataon'ny tsirairay ary hangataka famelana Tsy misy fahotana lehibe loatra ka tsy azo avela. Anaka malalako, eo ambonin'io hazofijaliana io ny Tompo, misokatra ny tànana, miandry anao hanatona azy, miandry afaka mamihina anao, mitazona anao, miambina anao ary miaro anao. Miandry anao hiverina Aminy fotsiny Izy, miandry anao Izy ary tia anao amin'ny fitiavana lehibe sy tsy manam-petra.
Anaka, aoka ho tia olona ianareo.
Ankehitriny dia omeko anao ny fitahiako masina. Misaotra anao fa nanafaingana ahy.
* Na dia nisokatra manerantany aza ny ankamaroan'ny fiangonana dia mbola misy ny tsy mbola nanao. Amin'ny toe-javatra italiana misy ny fisehoana dia nosokafana indray ireo fiangonana.
← Pedro Regis - Arovy ny Eokaristia
Gisella Cardia - Rivotry ny ady →